LA OGAADAY: Maxay Ahayd Sababt Dhabta Ahayd Ee Keentay Burburkii Heshiiskii Paulo Dybala & Romelu Lukaku Ee Man United & Juventus? - Gool24.Net
LA OGAADAY: Maxay Ahayd Sababt Dhabta Ahayd Ee Keentay Burburkii Heshiiskii Paulo Dybala & Romelu Lukaku Ee Man United & Juventus?
Intii lagu jiray suuqii xagaagii la soo dhaafay ee horaantii xili ciyaareedkan waxay kooxaha Manchester United iyo Juventus ku dhawaadeen in ay is dhaafistaan xidigaha Romelu Lukaku iyo Paulo Dybala.
Laakiin wakiilka Romelu Lukaku ee Federico Pastorello ayaa shaaciyay in xidiga reer Belgium uu marwalba doonayay in uu ku soo biiro kooxda uu hadda ka tirsan yahay ee Inter Milan.
Lukaku ayaa mar qarka u saarnaa in kooxda Juventus ay ka afduubto kooxda Inter Milan kadib markii ay Paulo Dybala u soo bandhigeen in uu Old Trafford ku biiro.
Wakiilka Lukaku ee Federico Pastorello cadeeyay in Lukaku uu doonayay in uu marwalba ku biiro Inter Milan inkasta oo diidmadii Paulo Dybala ee Manchester United ay noqotay sababta dhabta ah ee uu hehsiiskii isku badalasho ee United iyo Juventus u burburay.
Federico Pastorello oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Romelu waxa uu rabitaankiisu ahaa in uu ka baxo Premier league. Waxa uu u baahnaa in uu dareemo jacayl, tani ayaa farqiga samaysay, wuxuuna markiiba dareemay soo dhawayntii diiranayd ee taageerayaasha Inter marka la barbar dhigo taageerayaasha Juventus”.
“Bianconeri waa kooxda fiican, waxyaabo badan ayaa Lukaku farxad galin lahaa in uu soo gaadho, laakiin Inter waxay u taagnayd goob isbadal taas ayuuna si toos ah u arkay. Markiiba waxa uu dareemay taageerayaasha jacaylkooda” ayuu wakiilka Lukaku hadalkiisa raaciyay.
Wakiilka Lukaku ee Federico Pastorello ayaa ka hadlay sababtii dhabta ahayd ee burburisay isku badalashadii Dybala iyo Lukaku ee Man United iyo Juventus.
Federico Pastorello oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Heshiis la’aantii u dhexaysay Dybala iyo Manchester United ayaa wax go’aamisay. Shaki la’aan kani waxa uu ahaa la wareegistii waayahayga wakiilnimo ugu waynaa. Waxaanu United ku qasabnay in ay aqoonsadaan in Lukaku uu doonayo in uu meel kale tago”.
“Zhang (madax waynaha Inter) iyo Conte ayaa talaabo muhiim ah sameeyay iyaga oo sare u qaaday dalabka ee intii ugu horayd ee lagama maarmaanka u ahayd la wareegistan”. ayuu Federico Pastorello hadalkiisa raaciyay.